Mayelana neNkampani - Print Peppermint
Ubani Print Peppermint futhi kungani usikhethe?
Ithimba elinobuchule, elinamakhono amaningi wokuphrinta kanye neqembu lokuphrinta elinolwazi lokukusiza ukufeza amaphrojekthi aphezulu kakhulu wokuphrinta wokudala.
2 Izindawo: Dallas, Texas (North America) + Berlin, Germany (EU)
Kuthenjwa ama-ejensi we-10,000 + nabaqambi
Amakhasimende: IGoogle, Iphini, uGeico, i-NBA, iWendys
5M + Amaphrinta nokusebenza ...
I-CEO noMqondisi Wobuciko
BUKA IVIDIYO YAKHO YOKUQALA
Print Peppermint wazalwa eqenjini lokudala elibizwa nge- "Incense & Peppermints "itholakala eDallas, eTexas.
Ukuthola Ukugxila kweLaser
Emuva lapho, senza konke: iwebhu, ukuphrinta, imicimbi, kepha ekugcineni, sibone ukuthi iPrinta ilapho inhliziyo yethu ikhona ngempela.
Ithimba lethu elihluke ngokuphelele labachwepheshe bezobuciko lisuka eTexas liye e-EU, nase-Asia.
Izingcindezi Zethu Eziqinile
Uhlobo: I-Speedmaster XL 75
Indawo enkulu yokuphrinta: 27 "x 20"
I-Max Speed: Amashidi ayi-15000 / ngehora
Uhlobo: ILithrone G40
Indawo enkulu yokuphrinta: 40 "x 30"
Indawo enkulu yokuphrinta: 10 "x 15"
I-Max Speed: n / a
Silangazelela ukuphrinta, ukuklama, nemvelo
Ithimba Lethu Core
Umsunguli / Umqondisi Wobuciko
Inhloko Yezokuphathwa Kwezimpahla
Sisonke Sixazulule amathikithi angaphezu kwe-170,000 eKhasimende!
Umphathi weQembu Lomoya
Amakhono ethu nobuchwepheshe bethu
Uma ufonela, uxoxa, noma uthumela i-imeyili nelinye lamalungu eqembu lethu uthola inzuzo yokubonisana nethimba elineminyaka eminingi yobuchwepheshe bokuqamba ukuphrinta.
Uma sithola amaphutha ekwakhiweni kwakho, asesabi ukukutshela (uhlobo lokuthi kungani usikhokha). Kepha, ungakhathazeki, sizophendula ngezisombululo ezahlukahlukene zokuqinisekisa ukukhiqizwa kokuphrinta okuphelele.
Kwethenjwa izinhlangano zokudala ezingaphezu kuka-10,000, kubandakanya: